Meteo amin’ny resaka vaky trano. Ny marainan’ny talata teo, rehefa avy namaky trano teny amin’ny faritra Méteo Ampasampitso izy dimy mianadahy dia nisy nahatsikaritra ny mpifanila vodirindrina
tamin’ny vaky trano. Ireto farany no niantso ny polisy ka raikitra ny fifanenjahana. Noraisim-potsiny ilay vehivay fa tafaporitsaka kosa ny namany hafa raha vantany vao nahatazana ny mpitandro ny filaminana. Niditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora io ny alarobia voalohan’ny volana aogositra 2019. Mbola karohina hatrany ireo namany nanjavona